MPANOMPON’NY FAHAMARINANA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juillet 12, 2013 Laisser un commentaire sur MPANOMPON’NY FAHAMARINANA.
« Fa ankehitriny, rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. »
Romana 6: 22
– Ny atao hoe ota dia ny fikomiana amin’Andriamanitra, na ny fialàna amin’Andriamanitra, na ny faniratsirana ny didiny…Voalaza ao amin’ny Romana 6: 23 « fa fahafatesana no tambin’ny ota » , ary ny fahafatesana dia fahavalo voalohany ho an’ny olombelona. Tena miteraka zava-dratsy ho an’ny olombelona tokoa ny ota satria mitarika ho amin’ny fahafatesana. Ambaran’ny Soratra Masina fa malalaka ny làlana mankany amin’ny fahaverezana na fahafatesana (indrindra ny ara-panahy) fa tery kosa ny làlana mankany amin’ny fiainana mandrakizay. Mahagaga fa raha misafidy ny olona dia ny làlan’ny fahotana no safidiany kokoa! Sarotra amin’ny olona ny ho afaka amin’ny ota, hany ka eto dia lazain’ity Soratra Masina ity fa natao ho afaka amin’ny ota izy, izany hoe misy manala azy amin’izany ota izany: rehefa natao ho afaka amin’ny ota hianareo ka tonga mpanompon’Andriamanitra.
– Tsy vitan’ny herin’ny tenantsika samy irery ny fialàna amin’ny fahotana. Raha nanota ny olona tao amin’ny saha Edena dia nahatsiaro ny fitanjahany ka nanao ravin’aviavy ho fitafiana kanefa tsy nahasarona ny fitanjahany izany. Rehefa Andriamanitra mihintsy no nanao fitafiana ho azy (akanjo hoditra) dia voasarona izany fitanjahana izany. Jesosy Kristy no Ilay tena fitafiana nataon’Andriamanitra hanaronana ny fahotantsika olombelona raha manaiky handray Azy ho
* fitafiana isika. Raha manaiky isika dia Andriamanitra mihintsy no manafaka antsika amin’izany fahotana izany: « rehefa natao ho afaka tamin’ny ota hianareo ». Ny Zanak’Andriamanitra lahy tokana no nirahiny hisolo vaika ny olona, ka nanaiky ny ho faty noho ny otan’ny olona na dia tsy nanota aza. Izay làlana tokana izay ihany raha eken’ ny olona no entin’Andriamanitra manafaka azy amin’ny ota.
– NY VOKATRA:
*mpanota zato isanjato ny olona, fa rehefa natao ho afaka amin’ny ota izy dia marina zato isan-jato, satria efa nohamarinina.
*rehefa afaka ny ota dia tonga mpanompon’Andriamanitra ny olona.
*rehefa afaka ny ota dia misy ny vokatra ho amin’ny fahamasinana.
*rehefa afaka amin’ny ota ny olona, amin’ny farany dia mahazo fiainana mandrakizay izy.
MISY ary ny fotoana tsy nanekentsika ny fanafahan’Andriamanitra antsika amin’ny fanompoana ny fahalotoana sy ny tsy fahamarinana Aoka kosa isika izao ankehitriny izao hanaiky ho dioviny, amin’ny alàlan’ny Zanany irery izay manaiky ny hitondra ny helotsika.
Koa raha manaiky isika, dia omeny ny fiainana mandrakizay.
Jesosy hampahery anao
Publié parfilazantsaramada juillet 12, 2013 Publié dansUncategorized